अलेक्जेन्डर महान विश्व विजय गर्दै भारत वर्षसम्म पुगेका थिए । भारतबाट फर्कन लाग्दा चिनोका रुपमा एकजना ज्ञानी सन्त लैजाने विचार गरेर आफ्ना सैनिकलाई सन्त खोज्न निर्देशन दिए । सैनिकहरू सन्त खोज्दै डण्डामिसको झुपडीमा पुगे । उनीहरुले कडा स्वरमा आफूहरूलाई सम्राटले बोलाएको बताए ।
डण्डामिस त्यसबेलाका ठूला ज्ञानी सन्त थिए । उनलाई कुनै कुराको लोभ थिएन । सिकन्दरको नाम सुन्नासाथ थर्कमान हुने त्यो समयमा सम्राटको प्रस्तावलाई उनले सिधै इन्कार गरिदिए । सैनिकहरुले धेरै प्रयास गर्दा पनि उनी टसमससम्म पनि भएनन् । सारा प्रयास विफल भएपछि स्वयं सिकन्दरका लागि त्यो विषय प्रतिष्ठाको सवाल बन्यो । उनी आफैँ कुटी पुगेर रवाफपूर्वक भन्न थाले‚ ‘म आधा राज्यको सम्राट हुँ । मसँग हिँड्नुस् ।’ कति पनि नहिच्किचाई डण्डामिसले जवाफ फर्काए‚ ‘सम्राट रे! हेर्दा त भिखारी जस्तो देखिन्छौ ।’ सन्तको अकल्पनीय र तेजोवध गर्ने खालको वचन वाण सुनेर रन्थनिएका सम्राट भन्छन्‚ ‘म कसरी भिखारी भएँ प्रमाणित गरेर देखाउनुस् ।’
सन्त मन्द मुस्काउँदै भन्छन्‚ ‘सोच्नुस तपाईं र म मरुभूमीमा हरायौं । तपाईंको सैन्यदस्ताले बाटो बिरायो । कयौं दिनसम्म खान पाइएन । पानीसमेत दुर्लभ हुँदै गयो । त्यस्तो अवस्था जहाँ अर्को एक घण्टा पानी पिउन पाउनुभएन भने तपाईंको अन्त्य हुँदैछ । पानी… पानी… भन्दै तड्पिरहनुभएको छ । त्यो खराब स्थितिमा मैले एक लोटा पानी लिएर दिएँ भने त्यसको बद्लामा मलाई के दिनुहुन्छ ?’
सिकन्दरले सोचमग्न भएर जवाफ दिए‚ ‘म सम्राट हुँ । जे पनि दिन सक्छु । तर त्यहाँ एक लोटा पानी भनेको पानी नभएर जिन्दगी थियो ।’ उनले हाँस्दै भने‚ ‘म आधा राज्य दिन्छु ।’ ’समय घर्किँदो छ । अब तपाईंसँग मात्र आधा घण्टा जीवन बाँकी छ । मैले आधा राज्यले पानी दिन इन्कार गरें भने त्यसको बद्लामा के दिनुहुन्छ ?’ सन्त थप आक्रामक बन्दै सोध्छन् ।
सोचेर सम्हालिँदै सम्राटले जवाफ फर्काए‚ ‘मेरो जीवन बराबर राज्य हुन सक्दैन । त्यसैले एक लोटा पानीका लागि मेरो जीवनभर कमाएको सारा राज्य कबोल गर्छु ।’ विजयभावमा सन्त बोले‚ ‘महाराज! मैले अघि नै भनेको होइन, तपाईं भिखारी हुनुहुन्छ । आखिर जीवनभर कमाएको सम्पत्ति एक लोटा पानी प्रमाणित भएन र ?’ राजाहरुका राजा सिकन्दर अनायास एउटा सन्तको खुट्टा समाउन पुगे । त्यही घटनाको प्रभाव उनले उर्दी लगाए‚ ‘मेरो मृत्युपछि मेरा दुवै हात कात्रो बाहिर निकालिदिनू । विश्वले थाहा पाओस्, सम्पूर्ण संसार जितेर पनि मर्दा सम्राट सिकन्दर खाली हात जाँदैछ ।’
कोभिड १९ को आतंकले मानव सभ्यतामा एउटा संगीन प्रश्न उठेको छ– ज्यान ठूलो कि धन ? विश्वका सिकन्दरजस्तै शक्तिशाली नेताहरुको अवस्था यतिबेला सिकन्दर महानको जस्तै थाल खाउँ कि भात खाउँ जस्तो भएको छ । बिनाहतियार विश्वमा आतंक फैलिरहेको छ । बाहिर हेर्दा ठीकठाक, भित्रभित्रै धमिराले सिध्याएको काठजस्तो अवस्था छ । सडक छ, मान्छे छ तर मान्छेमा ऊर्जा छैन । जहाज छ, यात्रु शून्य । एप्रोन लगाएका डाक्टर छन्, रोगको उपचार छैन । मान्छेसँग मान्छे डराएको छ । ऋतु परिवर्तन भएको कसैलाई पत्तो छैन । पात्रोको पेज फेर्ने जाँगर कसैमा छैन । मान्छे संगीतको सात सुरभन्दा जीवन गीतमा अल्मलिएको छ ।
पारखीहरु भन्छन्‚ ‘आरुबखडा फुल्ने यो मौसममा माइत गएका छोरी बुहारी माइतीको घरआँगन चटक्कै छाडेर बुहार्तनका लागि घर फर्कन्छन् । अझ नधकाउनेहरु योभन्दा पर गएर छेडखान गर्दै प्याच्च भनिदिन्छन्‚ ‘यो विवाहयोग्य युवतीलाई कुत्कुत्याउने मौसम हो ।’ अझ मायाको फूल फूलाउनेहरुको संसारै अलग छ । सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा माया फक्रन सुरु भएका छन् । धेरै चन्द्रमायाहरु चाँदनीको विशेषण पाएर गजक्क परेका हुन सक्छन् । आरुबखडा फुल्ने कोकिल साम्राज्य पनि रोटीको व्यथा दुख्न छाडेको छैन ।
मंसिरमा अन्नको रासमा दाइँ गर्दा जोडेका मुसाका जहान फागुन, चैतमा मौसम उजाडिएसँगै पोइला जान शुरु गर्छन् । भनिन्छ‚ खडेरी लागेपछिको मौसममा जहान पाल्ने हुति मूसामा रहँदैन । जे भएपनि फागुन, चैत पुरानो पात हो भने वैशाख नयाँ मुना हो । पुरानो पातले मुनालाई जीवन सुम्पिएर आफू बिदा हुनुपर्छ । यो प्रकृतिको नियम हो ।
मिलनको धड्कन र विरहको वेदना नै प्रेमको जमिन हो । यसमा चैतन्य र प्रज्ञा दुवै हुन्छन् । यो दुवै मिसिएको चास्नी कसलाई प्रियकर नहोला ?
समय बद्लिएपछि मान्यता स्वतः बद्लिन्छ । हामीले शिक्षक फेर्न जान्यौं, कोर्स फेर्न जानेनौं । पोहोरको बसन्त ऋतुमा पनि मौरीले फूलको रस नै बटुलेको थियो । झिंगा फोहोरमै घुमेको हो । गाईको पेटमा घाँस नै आहारा परेको थियो । काँडाले फूलमाथि हस्तक्षेप गरेको छैन । बाघले आहारामा मृग छाडेको छैन । बिरालाको नजरमा मूसा नै परिरहेको छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि पानीले छिट्टै आकार बनाउने आफ्नो शिल्पी छाडेको छैन ।
झरी असार‚ साउनमै बर्सिने हो । ठिहीको सामर्थ्य पुस, माघमै देखिने हो । यी सबै देख्दादेख्दै हामी भन्छौं– समय बद्लियो । अहँ‚ बदलिएको समय होइन, हामी हो । समय बेइमान हुन्न, फितलो त हामीले लिएको संकल्प हो । विश्वका झण्डै अरब मानिसका लागि घडीले बजाउने त्यही चौबीस घण्टा त हो । मिलको फित्ताजस्तो एउटै गति र एकै ठाउँ घुमेका हामी दम्भ गर्दै भनिदिन्छौं– मैले संसार फन्को लगाएको छु ।
हामीलाई हाम्रा बाबु बाजेको अनुभव सुन्ने फुर्सद भएन । सन्तानलाई डाक्टर, इन्जिनीयर‚ पाइलट बनाउने सोख राख्यौं । एउटा प्रतिनिधि पात्र यस्तो जन्मिएन, जसले भनोस्- म आफ्नो बुबाजस्तो बन्छु । समस्या यहीँ छ । यही बाटो हिँड्दा हिँड्दैको पट्ठो भोलि हजुरबा बन्छ‚ अर्थात् बाटोले बुढ्याउँछ । पोहोर फुलेको फूल मुर्झाएको कथा बन्दैन । पोहोर सुस्वास्थ्यको कामना गरेको ज्यान कुपोषणले दैवको प्यारो बनेको हुन्छ । तर त्यसको लेखा छैन ।
समय बित्नका लागि मात्र बित्दैन । यो नयाँ कामको लागि उत्तोलक पनि हो । नागरिकताबिना पनि मानिसको आफ्नै अलग परिचय हुन्छ । कागजी पढाइबिना पनि ज्ञानका अजस्र स्रोत भेटिन्छन् । माटो र बाटोको जस्तो शक्तिशाली सिकाइ अरुको के हुन्थ्यो र ? स्कुल, कलेजले दिने कागज त फी तिरेको प्रमाणमात्र हो । बाहिरी आँखाले देखेको भन्दा अन्तरचक्षुले देखेको दृश्य कञ्चन हुन्छ । बाहिरी आँखाले रंग खुट्याउँछ । भित्री आँखाले गुण दोष ।
एकैछिन बखान गरौं सौन्दर्यको । यही राजधानी हो, जहाँ गोलीगाँठो देखाएर हिँड्ने किशोरी भानुभक्तका नजरमा ‘वेश्या’ दरिए । समयको उडान अर्कैतिर मोडिएको छ । अब मौसमले पोशाक नभएर पोशाकले मौसम बद्ल्छ । फाटेको लुगामा फेसनको लेपन लगाएपछि त्यो आधुनिकतामा अनुवाद हुनपुग्छ । परिवर्तन आत्मसाथ नगर्ने हो भने डाइनोसरको नियति सबैको भाग्यमा लेखिने निश्चित छ ।
भनिन्छ, संसारमा तीन किसिमका मानिस हुन्छन् । एकथरि जीवनलाई सराप्छन् । अर्काथरि आशिर्वाद दिन्छन् । तेस्रोथरि जीवनबारे चिन्तन‚ मनन गर्छन् । भौतिकताले उत्कर्षमा पुगेको युरोप, अमेरिका आजसम्म पनि सुन्दरीहरुको सनकमा सञ्चालित हुने गरेका छन् । त्यहाँका राजनेताहरुको व्यक्तित्व उठाउने या रसातलमा पुर्‍याउने कुराको निधो उनीहरुको गतिविधिमा भर पर्छ । एउटा सुन्दर मोडल म्याडोनाको व्यक्तित्वले त्यहाँका पुरुषहरुको व्यक्तित्व नै निरीह बनाएको विगत छ ।
एकपटक इतिहासको आँखीझ्यालबाट चिहाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ फ्लोरेन्स, युपी साद्रे, क्लियोपेट्रा र मार्लिन मुनरोजस्ता विश्व प्रसिद्ध अप्सराहरुको वर्णन पाउनुहुनेछ । जसका अगाडि क्रूर शासकहरू समेत नतमस्तक बनेका थिए । मार्क्स–एंगेल्सका विश्वप्रसिद्ध कृति पनि म्याडोनाको ‘सेक्स’ पुस्तकका अगाडि सयौं कोस पर छोडिए । सुन्दरतालाई यसैको सामर्थ्यमा स्वीकार्ने हो भने यो प्राकृतिक शक्ति पनि हो । अझ योभन्दा पर गएर भन्दा सन्तुलन पनि हो ।
समयअनुकूल आफूलाई उभ्याउनुपर्छ । समयलाई सापेक्ष रुपमा स्वीकार्नुपर्छ । बसन्तलाई मौसममा नभई मनमा भित्र्याउनुपर्छ । मौसम र भावना एकसाथ तरंगिएको प्रेममा नै हार्दिकता हुन्छ । नत्र त्यो चुँडिएको गिटारबाट आउने आवाजजस्तो कर्णकटु हुनपुग्छ । मिलनको धड्कन र विरहको वेदना नै प्रेमको जमिन हो । यसमा चैतन्य र प्रज्ञा दुवै हुन्छन् । यो दुवै मिसिएको चास्नी कसलाई प्रियकर नहोला ?